Fiber Optical Splice Kuvhara Vagadziri & Vatengesi - China Fiber Optical Splice Kuvhara Fekitori
Fiber optic splice kuvhara (FOSC) imwe inonzi fiber optic kurongedza kuvhara, chishandiso chinoshandiswa kupa nzvimbo uye chengetedzo ye fiber optic tambo dzakarukwa pamwechete panguva yepakati loop fiber optic network network. Iyo inogona kuiswa pasi pevhu, zvemuchadenga, kumisikidza -madziro, kukwirisa-pole uye kukwirisa nzira.
Zvinoenderana nekushandisa kwakasiyana, kune maviri marudzi e fiber optic kuvhara mumusika wevashandisi kusarudza: Horizontal mhando fiber optic kuvhara uye yakamira mhando fiber optic kuvhara.
Horizontal mhando fiber optic kuvhara kwakafanana neyakafa kana cylindrical bhokisi, rudzi urwu rwekuvhara runonyanya kushandiswa mukukwidza madziro, kukwirisa nekuviga pasi pevhu. Vertical mhando fiber optic kuvharwa inonziwo dome mhando fiber optic kuvhara, yakafanana nedome uye nekuda kwechimiro dome inoita kuti zvive nyore kuiswa munzvimbo zhinji.
Jear FOSC inogadzirwa neyekutanga grade UV isina kupurasitiki uye yakasunganidzwa nechisimbiso izvo zvinoita mamiriro ekunze uye ngura chiratidzo, izvo zvinopa chivimbo kuita kungave pamusoro kana kuvigwa pasi pevhu panguva yeFTTX network kuvaka.
Fibre optic splice yakavharwa inogona kuiswa nemabhaudhi kana simbi dzesimbi tambo zviri nyore, zvese zvinoenderana nenhumbi zvinowanikwa mune jera zvigadzirwa renji, ndapota inzwa wakasununguka kubata kune ramangwana ruzivo.
Fiber optic splice kuvharwa, FOSC-2D, 48 majoini
Fiber optic splice kuvhara, FOSC-3, 96 majoini
Fiber optic splice kuvharwa, FOSC-4 (144)
Ftth Fiber optic splice kuvhara, FOSC-5 (96)
Fiber optic splice kuvhara, FOSC-8 (12), 8 fibe ...
Fiber optic splice kuvhara 4 majoini, FOSC-9 (4)
Fiber optic splice kuvharwa, FOSC-7 (96)
Fiber optic splice kuvharwa, FOSC-6 (96)